EMULATORS Playstation o
Playstation waa Console ciyaarta video ah oo ay diyaariyeen Sony madadaalada computer, Console ahaa ee ugu horeeyay sii daayay ka dhacay Jabaan 1994, waa taxane hore ee consoles'ka ee ay Sony waxaa ugu horayn u tartamay Nintendo 64 iyo Saturn Sega ah, Console la Mahdiyo ay 3 naqshadeynta oo tayo leh cabbir, PlayStation taageertaa ah ul farxad analog oo xukuma ah oo ay la socdaan kaadhka xusuusta in uu kaydiyo xogta ciyaarta.
Capacity ugu badan - 660 megabytes.
Features Audio CD ciyaari o Interactive Audio.
Control gashto Laba gacanta xirayaasha fideysa ayaa la isku xira multitap pad.
RAM kaabta Laba kaararka saari 128 KB taageero Flash Memory OS u File Save, dib u soo ceshano iyo saar.
Serial Port I / O Link Cable xiriiriyaan.
RAM Main: 2 megabytes RAM Video: RAM 1 megabyte Sound: dhuleed 512 kiiloobayt CD ROM: 32 kilobayt OS ROM: 512 kiiloobayt.
PCM il audio
Sababaha Playstation HORUMARINTA EMULATOR:
Nidaamyada hawlgalka lagu taageeray laguna aragti awood ay PS:
Emulators PlayStation ah loo horumariyo socda nidaamyada hawlgalka:
Khayaadka oo ka shaqeeya by dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyadda ah ee processor iyo qaybaha shaqsi. Waxaad dhiso gabal kasta oo gaar ah oo ku saabsan nidaamka ka dibna xirmaan xubnihii badan sida fiilooyin sameeyo hardwar
TOP TOBAN EMULATORS:
ePSXe waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah ugu wanaagsan PlayStation Emulator. Update ugu danbeysay ee u emulator la sii daayay 2008-EPSXE qoreysa nidaam plugin wanaagsan ka awoowe, jidaynayey isticmaala inay qaadato oo aad doorato u dhexeeya qaababka kala duwan ee GPU, codka, iyo xaasidnimo CD-ROM filaayo in aad hardware. Fursadaha emulator ayaa u oggolaatid waafaqsan yahay kulamo badan kadib markii yar tweaking ah. EPSXE u baahan yahay BIOS PlayStation ah si ay u shaqeeyaan. Guusha emulator ay ku xidhan tahay inta kulan ee u sharrixi kara iyo waxa ay ilaa xad waa mid deggan oo ePSXe waddaa oo dhan Games PlayStation. Haddii aad tahay dhagaan oo ay dhibaato socda kulan waxaa had iyo jeer waa bulsho nool meesha aad kala hadli kartaa arrimaha ku saabsan emulator ah. Guud ahaan tani waa emulator tayo leh taas oo u fudud in ay Mudanayaasha ah, ee naqshadeynta iyo taageero dhawaaqa on emulator tani waa mid aad sax.
kulan ganacsi si fudud u ordi karaan
weyn dhawaaqa iyo naqshadeynta engine
Khayaadka oo Fast iyo aad sax.
Taageerada hab qeexidda sare
Emulator Xasilloon waxaa inta badan kulamada ordi karaan
PSX waa mid aad u fudud ah in Mudanayaasha waxaa loo arkaa in ay si buuxda u emulator is-jira ah, waxa aad u deggan oo ordi karaan noocyo kala duwan oo balaadhan oo ah kulan. Waxaad si fudud u baahan tahay in Mudanayaasha iyo shuban aad ps1 image disk. PSX emulates shaqo ee PS1 ee your computer, wuxuuna socon doonaa cajalladaha aad ku jiraan matalaadii dhibaato la'aan ah.
Waafaqsan Great leh noocyada kala duwan ee qalabka.
Play dhan videogames aad Playstation
Waxaad aad keyboard, mouse ama xitaa la joystick ah ka ciyaari kara, sida in aad door bidayso
ISO taageero qaab ka mid ah.
Necayb ah u baahan yihiin wax gaar ah u qaabeynta.
Aad u fududahay in la isticmaalo.
No plugins dheeraad ah
Khayaadka oo sax ah la naqshadeynta HD iyo dhawaaqa
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay computer oo degdeg ah
Cayayaanka yar yar
Haddii aad rabto in lagu dheelo ciyaaraha 3D hufnaan sare ka dibna emulator tani tahay doorashada ugu fiican aad u. Emulator Tani waa ugu fiican haddii aadan rabin in aad kala carar ciyaarta, PCSX ayaa si loo gaaro dega Khayaadka oo heer sare ah si kastaba ha ahaatee waafaqsan waa arrinta u ordi karaan kulan badan laakiin dhammaantiin ma aha.
Native taageero sheet qorista multitrack
Disk furitaanka saxaarad iyo xiritaanka cayaaraha in ay u baahan yihiin.
Galaydh widescreen A ee fursadaha processor (3D kulan oo kaliya)
Maamusha plugin taageero.
Waafaqsan yahay fursadaha anti-jitter in plugins naqshadeynta, sida saxnimada GTE in default Peops OpenGL plugin ah, ama Hagaajinta duwo saxnaanta Edgbla ee gpuBladeSoft iyo waxa ay sidoo kale taageertaa plugin PeteOpenGL2Tweak.
Naqshadeynta Heer Sare la kala carar ugu yar.
Taageero dhawaaqa Great
Arrimaha disc labiska
Keybinds ay qalad tahay.
Helo gaabis ah ku jir PC ee
Emulator Tani waa mid aad u deggan oo u badan mid ka mid ah ugu wanaagsan PlayStation emulators agagaarka quruxsan. Nidaamka plugin ayaa u oggolaanaysa in PCSX2 in ay ka shaqeeyaan guud ahaan tiro balaadhan oo ah caddaymaha kala duwan hardware PC. Tani waxay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu abuuro isku kala duwan ee plugins si ay u helaan waxqabadka ugu wanaagsan, oo aad u baahan doontaa, sida PS2 waa mid xiiso badan hardware in ay ku daydaan ah. PCSX2 ayaa waafaqsan si fiican ula maktabadda kulan. Waxa ugu weyn ee ku saabsan emulator waa in aad is gelin kara ciyaarta PS2 aad si toos ah aad DVD CD / drive iyo emulator ogolaan doonaa inaad ciyaarin ciyaarta oo aad kombuutarka. Inta aad ayaa loo qaybiyay in aad si fiican u emulator socda kulan ma noqon doonto mid wax badan ka mid ah arin, PCSX2 waa emulator weyn Playstation2 badan oo ka mid ah fursadaha. Waa Weeraryahanka xad si toos ah u isticmaalaan oo waa in horumarka firfircoon sidaa darteed waa inaad awoodaa inaad ka heli versions cusub oo la rajeenayo in kulanka sidii markii on dhaqdhaqaaqa iyo sii daayo cusub ka samaysan yihiin. Tani had iyo jeer lacagta weyn oo kaga badiyeen weyn waa markii uu dheelay ciyaar xaasidnimo ah.
Waxaad tweak karaa koobin kala duwan.
Taageero dhalato kulanka gaarka ah
Hacks si loo dedejiyo xaasidnimo ah
User interface saaxiibtinimo u fudud in ay ku shuban iyo ciyaaro image files.
Waafaqsan Great inta badan kulamada.
Naqshadeynta Heer Sare Ah xaasidnimo
Rajeenayo in kulanka gaarka ah ee caawin kulan gaar ah si fiican u ordo.
> Resource > Emulator > ugu wanaagsan PlayStation Emulators u isagana